Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 3t l0612 lak
Ny vavaka nataon'i Paoly indray (1 Tes 3:11-13)
Alakamisy 09 Aog.
Ny fiavian’i Jesôsy fanindroany dia antony manosika mahery vaika eo amin’ny fitomboana ara-panahy. Ny asa fanararaotana sy fampahoriana rehetra dia hoentina hotsaraina. Ny asa anehoana fitiavana sy hatsaram-panahy rehetra dia hekena sy homem-balisoa (vakio, ohatra, ny Mat. 10:42). Midika izany fa ny asa rehetra atao eto amin’izao fiainana izao, na kely toy inona aza, dia misy lanjany eo anatrehan’ny fitsarana farany ny zavatra rehetra. Kanefa ny zava-dehibe toy izany koa ho an’i Paoly, ary asongadina manokana ao amin’ny lesona amin’ity herinandro ity, dia ny fiavian’i Jesôsy fanindroany, izay ho fihaonam-ben’ny mpianakavy sy ny mpisakaiza, ary ny fifandraisan’izy ireo dia haharitra mandrakizay noho izay nataon’i Jesôsy. Ny fifandraisana kristianina dia tsy misy fepotoana hahataperany. Natao haharitra mandrakizay izany.
Vakio ny 1 Tes. 3:11–13. Inona no zavatra nampidirin’i Paoly tao amin’ny vavaka nataony ho an’ny Tesalônianina taorian’ny nahatongavan’i Timoty?
Ny 1 Tes. 3:11–13 dia toy ny tso-drano fanao amin’ny fifaranan’ny fanompoampivavahana. Mazava loatra fa naniry hiverina tany Tesalônika i Paoly mba hanarina ireo lesoka teo amin’ny finoan’ny fiangonana (1 Tes. 3:10). Kanefa na dia tsy afaka niverina tany aza izy dia afaka nitalaho tamin’ Andriamanitra mba hampandrosoany sy hampitomboany ny Tesalônianina eo amin’ny fitiavana, tsy eo amin’ny fifankatiavana teo amin’izy samy izy ihany, fa fitiavana ny mpifanolobodirindrina sy ny olona rehetra nifanerasera taminy. Io fitiavana io dia ho singa lehibe eo amin’ny toetran’izy ireo rehefa hiverina i Jesôsy.
Somary manaitra ny fanambaran’i Paoly, eo amin’ny and. 13, hoe ho avy “mbamin’ny masiny rehetra” i Jesôsy. Ao amin’ny Testamenta Vaovao, ny teny hoe masina, na olomasina, dia nentina nanondro olombelona. Etsy an-daniny, ny fanoritana ny fiavian’i Jesôsy fanindroany fahita mahazatra ao amin’ny Testamenta Vaovao dia ny hoe miaraka amin’ny anjely fa tsy amin’olombelona (Mat. 24:30,31; Mar. 8:39; 13:27). Koa iza àry izany ireo “masiny” voalaza eo amin’io andininy io?
Hita ny valin’izany fanontaniana izany amin’ny alalan’ny fanekena fa ny voambolana ao amin’ny Zakaria 14:5 no amp’asain'i Paoly eo amin’ny 1 Tes. 3:13 ary ampihariny amin’ny fiavian’i Jesôsy fanindroany izany. Ny hoe “masina” ao amin’ny Testamenta Taloha dia manondro, amin’ny ankapobeny, ny anjely (vakio koa ny Deo. 33:2 sy ny Dan. 7:10). Ny Testamenta Vaovao kosa, etsy an-kilany, dia manome heviny vaovao ho an’ny teny hoe “masina”: tsy iza ireo fa ny olombelona izay nandray ny fahamarinany avy tamin’i Jesôsy. Na eo aza izany, ao amin’ny 1 Tes. 3:13 dia iverenan’i Paoly ny famaritan’ny Testamenta Taloha ny teny hoe “masina” amin’ny dikany hoe “anjely” izay mijoro eo anatrehan’Andriamanitra. Izy ireo dia hiaraka amin’Ilay Andriamanitra sady Olombelona, dia i Jesôsy, amin’ny fiverenany eto an-tany.